XOG: Labo Shaqsi oo ay qasab tahay inuu qanciyo Madaxweyne Farmaajo (Xilka loo Magacaabi doono) | Nabadqaad Online
XOG: Labo Shaqsi oo ay qasab tahay inuu qanciyo Madaxweyne Farmaajo (Xilka loo Magacaabi doono)
Waxaa aad isku soo tarayay warka sheegayo in xilal badan lagu samayn doono isbadallo sida kuwa ciiddanka iyo midka maamulka G/Banaadir kuwaasoo laf dhabar u ah fulinta siyaasadda uu wato madaxweyne Farmaajo.
Xilka guddoomiyaha G/Banaadir ahna Duqa Muqdisho ayaa ah kan ugu hadal haynta badan dhanka isbadalka imaan karo maalmaha soo socda. Waxaa jiro warar u muuqdo kuwo baararka iyo fadhi ku dirirada ee sheegaya in laba shaqsi ay ugu cad cad yihiin doon doonista xilka guddomiyanimo ee Gobolka kuwaasoo kala ah Thaabid Cabdi Maxamed oo ah xilligaan Qundulka Safaaradda Soomaliya ee dalka Maraykanka iyo Yuusuf Jaalle oo mar soo noqoday Guddomiye xigeenka Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Labadaan shaqsi ayaa lagu tiriyaa dadkii safka hore kaga jiray u ololeeyntii Farmaajo ee doorashada madaxnimo ee dalka.
Dadka aadka u yaqaana labadaasi shaqsi ayaa tilmaamay in ay labaduuduba khibrad ahaan iyo aqoon ahaaan ay ku adag tahay in ay ka soo dhalaalaan xilkaasi maadaama maamulista caasimadda Muqdisho ay xilligaani u ban tahay qof ka samata bixin kara xaaladaha siyaasadeed iyo tan amni daro ay ku dhex jirto.
Yusuf Jaalle oo ah qurba joog sanadihii u danbeeyay ku sugnaa Muqdisho wuxuu xilkii uu ka hayay gobolka Shabeellaha Dhexe laga qaaday markii uu xijisan waayay kana soo bixi waayay howshii loo magacaabay.
Taabit oo isna ah shaqsi siyaasadda kusoo galay xigto hoosaadnimadii uu la lahaa Xasan Sheekh ayaa mar uu soo qabtay agaasinka xafiiska madaxtooyada, waxaana markii danbe loo magacaabya safiir kuxigeenka safiirkaa Somalia ee Mareykanka.
Taabit ayaa goobaha fadhi ku dirirada iyo maqaayadaha gashtay in xilkaan isaga loo magacaabayo, si jahawareerka siyaasadeed ee hadda ka taagan Muqdisho usii kiciyo.
Marka si sharci ah iyo awood qeybiga loo fiiriyo maamulka gobolka Banaadir waxaa iska leh beelaha Abgaal oo weliba si hoose marka loo ego beesha Galmaax Yoonis oo lagu xushmeeyo Xamar iyo Xamar Daye